Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika izao nefa dia manerana ny Nosy dia maina ny tany, tsy misy ny orana, maty ny fambolena rehetra, manampy trotraka ny barazy tsy ampy rano manodina ny famokarana herin'aratra.
Ao ny milaza fa sazin'Andriamanitra.
Ny marina dia tompon'andraikitra isika rehetra, manomboka amin'ny fanjakana izay tsy misy vina mazava ka hatramin'ny isika rehetra mamotika ny tontolontsika.
Ny rano dia mila fifehezana lavitr'ezaka, tsy vita indray andro, nefa ihany koa mamotika lavitra raha tsy hatao.
Ny ala eto amintsika dia ringana tanteraka, tsy mitombina intsony izany hoe tsy mahalany ny alan'antsinanana izany. Efa lany sy ripaka ny ala.
Ny antony dia tsotra. 90 % n'ny Malagasy dia mampiasa kitay sy saribao avokoa handrahoan-tsakafo.
Ny mpanao trano sy fanaka etsy andaniny.
Nefa tsy misy na iray aza politika ialana amin'izany na anoloana izany hazo tapahina izany.
Politika petatoko tsy misy mijery lavitra avokoa.
Ny fambolena dia miankina daholo amin'ny rano nefa tsy misy fotodrafitrasa maharitra sy lavitrezaka. Ny injeniera sy ny teknisianina momba ny rano atao ankilabao. Ireo minisitra mifandimby mitana izany ministera izany aza tsy nianatra momba izany akory.
Na asiana orana artifisialy aza dia tsy amaha olana velively fa handena ravinkazo kely fotsiny dia ho very avokoa satria na ny barazy sy ny toerana hitobian'ny rano aza tsy misy. Aza adino koa fa ho vidiana lafo ara-pahasalaman'ny olombelona, ny biby fiompy sy ny zava-maniry ny vokadratsin'ny orana artifisialy satria tsy sira ihany no araraka eny amin'ny rahona fa misy ion d'argent, izany hoe misy taimby majinika kely tsy hita maso, nefa iny hivarina anaty rano fisotro ka tsy ho levona anaty rano.
Atsy amin'ny Nosy Maurice dia na rano iray goutte aza tsy misy very ary ny fary dia misy pipeline marobe manondraka azy.
Madagasikara dia tany manana rano be fa tsy mifehy izany.
Tsy misy miracle io fa tsy maintsy atomboka ny asa ka miainga amin'ny fananana politika matotra izany fa tsy petatoko vonjy maika.
Miomana fa aorian'izao may tany izao dia ho tondra-drano indray, dia samy hifapitsetsetra eto indray hoe manainga zipo indray ny ao ambany tanàna.
Cheap Combivent No Prescription Needed [url=http://buygenericvia.com]viagra[/url] Independent Online Pharmacy Reviews Viagra En Ligne Moins Cher Viagra Kaufen Bei Ebay
lundi, 23 octobre 2017 09:42